Wax ka baro jaamacadaha ugu caansan Iswiidhan uguna muhiimsan | Somaliska
Wax ka baro jaamacadaha ugu caansan Iswiidhan uguna muhiimsan
Marka laga hadlayo dal kasta oo caalamka ku yaala heerkiisa horumarineed ee xag adeeg bulsho, dhaqan, waxbarasho iyo caafimaad intaba. Waxaa ay leeyihiin waxyaabo lugu xuso luguna qiimiiyo ama loo doonto lagana daydo. Dalkaan aannu haddaba ku noolnahay ee Iswiidhan waxaa uu ka mid yahay dalalka dunida galbeedka ee qeybaha aannu kor ku soo sheegnay horumar weyn ka gaaray loona soo doonto.
Haddaba maanta shabakadda Somaliska.com, waxaa ay idiin soo gudbineeysaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadaha dalkaanu leeyahay aqoonta laga helo. Waxaanu qoraaladeenan oo taxano ah aan ku eeggi doonaa heerka aqoonta mugga leh ee jaamacadaha Iswiidhan leeyihiin iyo kaalimaha ay caalamka kaga jiraan. Waxaa xusid mudan in Swiidhan ay tahay dalka bixiya biladda caanka ah ee Noobaayl-ka oo sanad walba bisha diseembar 10-keeda laga bixiyo. Biladaas oo ah bilad iyo abaal marin la gudoon siiyo qubaradda caalamka iyo barayaasha taqasuska ka sameeya culuumta akadeemiyadda seeyniska iyo arrimaha bulshadda sida qorayaasha xagga nabadda iyo xaquuqda aadanaha u ololeeya. Halka Noorweey oo Iswiidhan la qeybsata biladaasi bixiteeda ay bixiso biladda Nabadda.
Waxaanu ku bilaabeeynaa machadka weyn ee caanka ah Karolinska Institutet, machadkani waa machadka ugu weyn ee dalka, waa goob lugu sameeyo daraasaadka 40% ee culuumta caafimaadka iyo akadeemiyada. Wuxuu sidoo kale machadkani yahay machadka ugu balaaran ee laga helo nidaamka caafimaadka ee taqaska kala duwan leh. Tan iyo sanadkii 1901-kii, wuxuu ahaa midka had iyo goor soo xula ama magacaaba shaqsiyaadka la siiyo abaal marinta Noobaaylka ee fiisigis-ka.
La soco berito haddii Alla idmo qeybo kale oo xiiso leh
Warbixin ku saabsan waxbarashada
Jamacada magac maleh miyaa. Magaceeda iyo meesha ee ku taalo fadlan